Musharixiinta madaxweyne oo ku baaqay in Prof. Jawaari uu si KMG ah ula wareego xilka madaxweynaha – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Musharixiinta madaxweyne oo ku baaqay in Prof. Jawaari uu si KMG ah ula wareego xilka madaxweynaha
Musharixiinta xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa bilaabay olole ay ku dalbanayaan in guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka Soomaaliya Prof. Maxamed Sheekh uu noqdo madaxweyne KMG ah islamarkaana xilkana kala wareego madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Ololahaan oo ay haatan bilaabeen musharixiinta ayaa yimid kadib markii safiirka cusub ee Sacuudiga uu maalintii shalay waraaqihiisa aqoonsiga u gudbiyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo si rasmi ah u qaabilay, inkastoo markii dambe safiirka uu salaan ugu tegay guddoomiyaha baarlamaanka Prof. Jawaari.
C/raxmaan C/shakuur oo ka mid ah musharixiinta u tartameeysa xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in iyadoo la raacayo qodobka 94-aad ee dastuurka dalka uu ku baaqayo in guddoomiyaha baarlamaanka Prof. Jawaari uu la wareego xilka sii hayaha madaxweynaha Soomaaliya, islamarkaana Xasan Sheekh kursiga ka dego oo ku biiro musharixiinta tartamaya.
Sidoo kale, Cali Xaaji Xirsi oo isna ka mid ah musharixiinta madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay inay sharci darro ah inuu madaxweyne Xasan Sheekh kusii shaqeeyo xilka madaxweynaha, isagoo tilmaamay inay aheyd in safiirka Sacuudiga uu waraaqaha aqoonsiga ka gudoomo Prof. Jawaari.
Cali Xaaji Xirsi ayaa ugu baaqay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inuu dhowr dastuurka u degsan dalka islamarkaana uu xilka ku wareejiyo Prof. Jawaari.
Musharax Maxamuud Axmed Nuur Tarsan oo isna ka mid ah musharixiinta ayaa isna sheegay in Xasan Sheekh Maxamuud iyo kooxdiisa ay ku tunteen dastuurka islamarkaana ka dhigteen sida xaashiyaha gacmaha la isaga tiro oo kale.
Tan iyo intii uu dhamaaday xilligii dastuuriga ahaa ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxaa iska soo daba dhacaayay dalabka musharixiinta ee ah inuu xilka ka dego taasoo aan dhicin.
Ugu dambeyntii, hadii ay dhacdo in Prof. Jawaari uu xilka madaxweynaha si KMG ula wareego waxaa dhici doonta in gudoomiyaha baarlamaanka uu si KMG ahaan ah u qaban doonno ku-xigeenkiisa C/weli Sheekh Muudey, taasoo musharixiin kale ay ka cabsi qabaan inuu saameyn ku yeesho doorashada madaxweynaha Soomaaliya.